I-BS1000, i-self-assembly modular system ihlanganisa amashubhu nohlu lwezixhumi.Izixhumi zenziwa ngokubumba komjovo futhi zenziwe ngepulasitiki yokuqinisa ingilazi-fiber enamandla amahle.Amashubhu angaba yi-Aluminium noma i-fiber eyinhlanganisela futhi ingxenye ngayinye ubude ibe yi-1m kuphela.
Umbala ojwayelekile wamalunga umnyama;ngesicelo amalunga angenziwa ngeminye imibala.
Oda amashubhu namajoyinti ngokuguquguquka ngokuya ngokusungula kwakho noma isicelo.
Izicelo:Imicimbi yezemidlalo, Izitolo Zekhofi, imibukiso yezohwebo noma uhlelo lokuqondisa ezindaweni zomphakathi
Njengoba izinhlelo zokusebenza eziningi zisebenza ngochungechunge lwe-BS1000, Uku-oda amashubhu nezixhumi ngokuguquguquka ngokuya nge-inventory yakho noma uhlelo lokusebenza luyaphakanyiswa.
Imibono yohlelo lokusebenza: Uhlaka lomnyango 1x2m;Uhlaka oluphathekayo lwesibhengezo sikanxantathu, 1x1m, 1x2m, 1x3m;
Uhlelo lokuvimbela: noma yimuphi usayizi (ubuningi be-1m) ngendlela yobude nobude obuyi-1m
Ishubhu elenziwe ngefayibha eyinhlanganisela, lilungele imicimbi njengoba linesisindo esilula futhi yonga impahla.Ishubhu ye-aluminium izoba ngcono ezitolo zekhofi noma njengesistimu yokuqondisa ezindaweni zomphakathi
Zuza kusixhumi sethu sangempela esiklanywe i-engeli-eguqukayo, ifreyimu yokuvimbela iyakwazi ukwenza isibonisi nganoma ibuphi ubude nanoma imuphi umumo, ingasetshenziswa nasezitebhisini.
Isikhwama sokuthwala esihlanzekile se-oxford singanikezwa ukuze sipakishe amashubhu nezixhumi ngaphakathi ukuze kube nesibonisi esiphathekayo.Imitha elingu-1 kuphela ubude bezokuthutha buqinisekisa uhlaka ukuthi lubekwe kalula kunoma iyiphi imoto, olulungele imicimbi yakho.
Izinhlobonhlobo zezisekelo ziyatholakala ukuze zivumelane nesimo esihlukile, njenge-spike, i- iron base plate noma isisekelo samanzi
Xhumana nathi ukuze nixoxe ndawonye ukuze niqedele kahle.Ubukhulu bokuboniswa kwe-OEM bamukelekile.
(1) Isistimu ye-modular, izinhlelo zokusebenza eziningi, zingasetshenziswa kabusha nezinhlanganisela ezintsha
(2) isisindo esincane kanye ne-Portable
(3) Awekho amathuluzi adingekayo wokuhlanganisa
(4) Uhlu olubanzi lwezisekelo ezitholakalayo ukuze zivumelane nokusebenza okuhlukile
Okwedlule: Isibhengezo seW
Olandelayo: I-Café Barrier